Ko Toe: မန်းတောင်ဆီက ဆောင်းပန်းချီ
Posted by MYO HAN HTUN at 8:10 PM
ဒါမျိုးတွေ အမြဲဖတ်ချင်တယ်ဗျာ မျှော်နေမယ်
ဒါနဲ့ ကိုတိုးက ၀ိတ်မတယ်ဆိုတော့ လူငယ်အားမာန်က လူတွေနဲ့ရော သိလားဗျ
ကိုဘိုတို့ ကိုငယ်ထွေးတို့ပေါ့ ... မေးကြည့်တာပါ
ကိုငယ်ထွေးကိုတော့ မိန်းနားလေးမှာ မသိတဲ့သူ ခပ်ရှားရှားပဲ
အဲဒီဘဲက လုပ်ရှူကြီး :P ကိုဘိုဆိုတဲ့ ဘဲကြီးကတော့ တော်တော်ကစားတာဗျာ ကျွန်တော်နဲ့ တော်တော်ခင်တယ်။
ကိုတိုး Body နဲ့ မတူရင်တောင် ကိုတိုးထက်တော့ မလျော့ဘူး
သင်္ကြန်မှာ တုန်းက ကားပေါ်မှာ သူပါလာတာ တခြားကားပေါ်ကကောင်တွေ ဘယ်ကောင်ကမှ ပေစောင်းစောင်းမလုပ်ရဲဘူး :P စားလိုက်တာကလည်း တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီးတစ်ဖီး ကြက်ဥ ၁၀လုံးတို့ဘာလို့စားတာ တကယ့်ဘဲကြီးဗျာ
December 6, 2006 at 6:25 AM
လူငယ်အားမာန်ဆိုတာက မော်မော်စန်းထိုးမုန့်ဆိုင်က ဦးဟန်မြိုင် ရဲ့ Club နေမှာပါ။ ရောက်တော့ မရောက်ဖူးပါဘူး။
ငယ်ထွေးကတော့ ကြားဖူးသလိုလိုဘဲ။ ဘိုဘိုဆိုတာကတော့ ဆိတ်မုတ်ဆိတ်လေးနဲ့အရပ် ၆ပေ ကျော်ရှိတဲ့
ဟိုလူကောင်ထွားလေးနေမှာပါ။ အသက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ထက်ငယ်တယ်ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ပိုသိတဲ့
လူတွေကတော့ ချုံကြားက ဂုံဂါးလို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ စွတ်ကျယ်အပြတ်နဲ့ ၁၂ ရာသီလုံးလုံး
နေတတ်တတ်သူ အပုလေး ဂုံဂါးကိုတော့ တရုတ်တန်းမှာ နေတုန်းကတော့ အမြဲတွေ့တတ်သပဗျ။
ကိုဂုံဂါးလေးကတော့ အဆန်းဗျ၊ တရုတ်တန်းဈေး မပြောင်းခင်ကတော့ ဆောင်းတွင်းမှာ မည်သို့ပင်အေးနေပါစေ
စွတ်ကျယ်ကိုတောင်ဖြဲထားပြီး ဈေးထဲမှာဟိုပစ္စည်းမတာလိုလို ဒီပစ္စည်းမတာလိုလိုနဲ့ သူ့ဆိုင်နားမှာ
ဗလအကြွားပိုလို့ လမ်းသလားနေပါရဲ့ဗျာ။ ကိုမောင်ဆိုတဲ့ ဟိုမူကြိုမောင်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေပါ။
မန်းတလေးကို ၃ ၄ ခါရောက်ဖူးတယ်..မန်းတလေးတောင်ကို တခါမှ မတက်ဖူးဘူး။
စစ်ကိုင်းတောင်လဲ ရောက်ဖူးတယ်... စေတီတွေအများကြီးလောက်ပဲ မှတ်မိတော့တယ်။
ကိုတိုးကြီး..... မီးမီးလည်း အလေးမတယ်
ချိန်ခွင်ထဲ ထည့်ချိန်တဲ့ ၅၀ သားအလေးနဲ့ :P
နိုင်းနိုင်းစနေ ရေ . . . . .
ပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြေသလုံးတွေတုတ်လာလို့ ကိုယ့်ခြေသလုံးတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေက ဘောလုံးကန်သလားလို့မေးရင်တော့ ရှက်သွေးမဖြာရဘူးနော်။
လင်းလင်း ရေ . . . . .
၅၀ သားအလေးက တကယ်တမ်းကျတော့ ၄၂ ကျပ်ခွဲသားလောက်ပဲရှိပါတယ်။ မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက်ဆိုတော့ တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်သုံးဖို့သာစိတ်ကူးထားပါ။ မ ရ ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စအတွက် သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့။